Waa side xaaladda deegaanada ay ku dagaalameen Al-Shabaab iyo Mukhtaar Rooboow? – Radio Jowhar
Waa side xaaladda deegaanada ay ku dagaalameen Al-Shabaab iyo Mukhtaar Rooboow?
Comments Off on Waa side xaaladda deegaanada ay ku dagaalameen Al-Shabaab iyo Mukhtaar Rooboow? 43 Views
Wararkii ugu dambeeyay ee deegaanka Abal oo ka tirsan gobolka Bakool ayaa sheegaya in maanta uu dagan tahay kadib dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-shabaab ay mar kale weerar ku qaadeen wadaadka gooni u goosadka ah ee Sheekh Maqtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur).
Al-Shabaab ayaa doonaya in ay xoog ku maquujiyaan wadaadkii hori kaga gooystay ee Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur ka dib markii la sheegay inuu diiday wadahadalo la doonayay in dib loogu celiyo kooxda Al-Shabaab.a